Yenza ithisisi yakho yesayensi ibhaliswe ngokufanelekileyo. Unathi ufumana uncedo olukhawulezileyo kumbhali onesiporho onamava.
Ithisisi yesidanga - zibhalele	okanye	Masibhale
Die ithisisi yesidanga yithisisi yokuqala yokufunda ngezihloko ezifanelekileyo zophando. Inamaphepha angama-20 ukuya kuma-35 kwaye ixesha lokulungisa liqhele ukuba ziinyanga ezimbini ukuya kwezi-2. Ngoncedo lwe ithisisi yesidanga umsantsa wophando kufuneka uvaliwe.
I-bachelor thesis-ithsisi enesidima kufuneka ibandakanye ntoni?
das Ukubhala ithisisi ye-bachelor imele uviwo lokugqibela kwinqanaba lakho lokuqala lemfundo.Ngokuqulunqa i-thesis, abafundi kufuneka basebenzise iindlela abazifundileyo ukuze baphuhlise izihloko ezifanelekileyo zophando. Ngokusisiseko, i-bachelor theses ihlala ijongana nokulungiswa kombuzo wophando ngesihloko esele sijongiwe. NgesiJamani, ke, ukudityaniswa kolwazi esele luphunyeziwe. Nangona kunjalo, abafundi abaninzi baziva besoyiswa ngulo msebenzi ubanzi. Akunyanzelekanga ukuba kube njalo!
Isihloko esifanelekileyo se-bachelor thesis
Uninzi lwabafundi banobunzima ekufumaneni isihloko se-bachelor ithisisi efanelekileyo okanye ekuyileni umbuzo wophando. Ngaba unengxaki efanayo? Okanye ngaba ufuna uncedo ekufumaneni umsantsa ofanelekileyo wophando?
Njengomgaqo ngokubanzi, abafundi kufuneka bakhethe izihloko apho babonisa umdla omkhulu. Umzekelo, ngaba ubusithanda kakhulu isihloko okanye indawo yesifundo ngexesha lezifundo zakho? Ukuba ungawuphendula lo mbuzo ngo-ewe, sele ulinyathelo elinye ukuya phambili. Ukongeza, kuya kubakho ukucaciswa ukuba luphi uncwadi lwangoku ngesihloko sakho. Ngaba ungayifumana imithombo elungileyo yokuxhasa ingxoxo yakho? Ukuba ungaphendula ngo-ewe kulo mbuzo nawe, uya kuba kwimeko yokuqhubela phambili ucwangcise umsebenzi wakho.
Ukuba awukwazi ukuphendula le mibuzo mibini ngo-ewe, okanye ukuba unikwe isihloko ongasikhathalelanga, izinto ziya kubonakala zahlukile. Nangona kunjalo, akukho hlazo ekufuneni uncedo ngale nto. Oko kubizwa ngokuba ngumqeqeshi, njengoko uhlala ufumana kunjingalwazi wakho, ngokuqinisekileyo kuvunyelwe. Siyavuya ukunceda ngophando kunye nokwenziwa okufanelekileyo kombuzo wophando. Zuza kwiminyaka yethu emininzi yamava kunye nabasebenzi bethu abanezakhono. Sisonke siya kufumana isisombululo.
"Wow, ndipase kakuhle kakhulu! Ndiyabulela kakhulu!"
I-Bachelor kwi-Interactive Media
Ulwakhiwo lwethisisi ye-bachelor-yintoni ekufuneka uyijongile xa ubhala ithisisi yakho
Njengawo nawuphi na umsebenzi wezifundo, kukwakho nemigaqo yethisisi ye-bachelor ekufuneka ilandelwe. Olona lwakhiwo lwethisisi ye-bachelor luqulathe iphepha lokugubungela, uluhlu lwezinto ezikhoyo kunye nezinye izikhombisi, icandelo lesicatshulwa, kunye noluhlu lweencwadi kunye nesihlomelo. Nangona kunjalo, oku kuyahluka ngokuxhomekeka kwisitulo kunye nenkqubo yesidanga.
Nangona kunjalo, ezi zinto zilandelayo zihlala zisemthethweni:
Ininzi ifumaneka kwiyunivesithi njengetemplate iphepha lokugubungela ubuso bakho ithisisi yesidanga Oku kubandakanya isihloko somsebenzi, umbhali, uprofesa owongameleyo kunye neenkcukacha zeyunivesithi apho ubhala khona ithisisi yakho ye-bachelor.
Ukubonelela ngesishwankathelo esibi sezihloko ekujongwe kuzo kwithisisi yakho kunye nokucacisa ngokucacileyo ukwakheka kweengxoxo, kulandela iphepha elibanzi imixholo. Itheyibhile yokuqulathiweyo yahlula izihloko eziphambili kunye nemixholwana kwizahluko eziphambili nezingaphantsi kwaye inika amanani ephepha. Apha kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kwifomathi efanelekileyo kunye nokuthobela umthetho, enokwahluka ngokuxhomekeke kwisitayile.
Ezinye izikhombisi ezifana noluhlu lwamanani, izifinyezo kunye neetafile
le Izalathiso yiza ngqo emva kwencwadi, kodwa ihlala iyinto yokugqibela edityaniswe ephepheni. Kananjalo abasoloko beyinxalenye esisiseko yomsebenzi, kuba ixhomekeke ekubeni bangaphi Iitafile, Izifinyezo kwaye Imizekeliso Zisebenzise emsebenzini wakho. Nangona kunjalo, banika umfundi isishwankathelo sezinto ezongezelelweyo ezichazayo okanye izinto ezilula ngaphakathi kwitekisi kwangaphambili kwaye zenze kube lula ukufumana imifanekiso ebalulekileyo ngokukhawuleza emva koko.
Inxalenye yokubhaliweyo-intliziyo yethisisi yakho ye-bachelor
Ngoku kufikwa kowona msebenzi wokwenene, oko kukuthi ukubhala isicatshulwa sakho sempikiswano. Imfuno esisiseko sisicatshulwa esime ngokucacileyo ekufuneka usenzile ngaphambi kokuba uqale ukubhala ithisisi yakho. Ngoncedo loku ugcina umsonto oqhelekileyo kwi-bachelor thesis yakho kwaye unokugxila kumfanekiso ohambelanayo xa ubhala. Ulwakhiwo lusebenza ngendlela ethile njengencwadana yemiyalelo ye- Ukubhala ithisisi yakho ye-bachelor. Kwicandelo lesicatshulwa, kwakhona, iimfuno ezikhoyo zokufomatha kufuneka ziqwalaselwe kunye nesitayile esifanelekileyo sokucaphula xa usebenzisa imithombo yolwazi.
Kubaluleke ngakumbi xa Uluhlu lweencwadi Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ireferensi yoncwadi igqityiwe, kuba ukukopa ngokukhawuleza kukhokelela ekusileleni kwakho ithisisi yesidanga. Apha ngokukodwa, imigaqo yokufomatha isebenza kwakhona, apho kubekwa ixabiso elithile xa kulungiswa umsebenzi, kuba zibonisa indlela yakho yokusebenza kunye nolwazi lwezifundo. Kuxhomekeka kwisitayile, indlela ulwazi olunikezelwa ngayo iyahluka kakhulu, yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba uqhagamshelane nesihlalo sakho ngokweenkcukacha.
Ukujikeleza umsebenzi wakho appendixleyo ayifakwanga kwigama okanye kwinani lephepha lomsebenzi wakho wokwenyani. Nangona kunjalo, isihlomelo sikunika ithuba lokujikeleza umsebenzi wakho ngomxholo owongezelelweyo kunye nokuxhasa ubume bempikiswano. Unokubandakanya izinto eziyimfuneko apha ezingasasebenziyo (ezingasasebenziyo) emsebenzini.
Kodwa kuya kufuneka wenze ntoni xa ungazi ukuba wenzeni ngokulandelayo?
Ke ngoko, kuya kufuneka ukuba ubene-thesis yakho ebhalwe yi-arhente yokubhala
Inkxaso yobungcali ngethisisi yakho ye-bachelor
Siyavuya ukukunceda ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni!
Siza kufumana eyiyo Umxholo wenzululwazi yakho ye-bachelor. Ukuqala ngokulungiselela i-synopsis: ukusuka kwingxaki okanye kumbuzo kunye nenqanaba lophando ukuya kwiinjongo / i-hypothesis, indlela kunye nolwakhiwo kwi-bibliografi yokuqala. Ndiyabulela kwi-synopsis, ungagcina umxholo kunye nolwakhiwo lwethsisi kwaye ucwangcise uphando lwakho ngokufanelekileyo.
kunye ababhali abanesiporho abanamava Sukufumana nje isampulu yakho ithisisi yesidangakodwa inkqubo epheleleyo nodliwanondlebe neengcali kunye novavanyo. Njengobalaseleyo Iarhente yokubhala ngesiporho Siyakuqinisekisa ngokuqinisekileyo ukuqonda kwaye Ukungaziwa.
Uyaphumelela ekubhaleni, kodwa ungaqinisekanga ngemibuzo, ukwenziwa nokunye?
Ukuhlela nokufunda kwakhona kwethu kuyayiphucula loo nto yeelwimi Umgangatho ngokunjalo zobugcisa Ubuchule bakho Ithisisi. Nje ngaloo nto Ukufunda kwakhona, iimpazamo ezininzi zithintelwe kwaye umsebenzi owongezelelweyo wenziwe kuwe.
Abafundi bahlala belibala indlela yokujongana nabo ngokufanelekileyo ngenxa yoxinzelelo uphawu, Umbhalo osemazantsi, usetyenziso lwe Icacisiwe nokunye okuninzi. Sineengcali zazo zonke izifundo, ukuze usoloko ufumana umhleli olungileyo njengomthengi, owaziyo amalungiselelo ngqo.
Ngaba i-bachelor ithisisi yakho ibhaliwe okanye ukufundisisa kwakhona kwaye ukonwabele izibonelelo zepapernerds.
Ngokusemthethweni, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo!
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwakho usondele, kusafuneka ufunde kwaye wazi malunga neemviwo zaseyunivesithi ezizayo Iingxaki zexesha ayikwazi kuqhubeka? Akukho ngxaki! Unathi ufumana uncedo lobungcali ukusuka kumava kunye Umbhali wesiporho onobuchule, nokuba ngowuphi umxholo! Ababhali bethu abanesiporho banesishwankathelo esibanzi kwaye esisexesheni soncwadi kwicandelo labo, baqhelene kakhulu nesigama esifanelekileyo kwaye bayayazi indlela yokusebenzisa iindlela ezithile zesifundo ngokuchanekileyo ukuphucula eyakho ithisisi yesidanga ukugqiba ngempumelelo. Iqela lethu ecaleni kwakho, ungafundela iimviwo ezizayo kwaye akusekho mfuneko yakuzixhalabisa ngomsebenzi wakho wesayensi Iithisisi zesidanga yenza!
Imibuzo malunga ne-bachelor thesis kwaye yintoni ebalulekileyo xa ubavumela babhale
Kubiza malini ukubhalwa kwethisisi ye-bachelor?
Njengomthetho, ababhali bethu basebenza kwithisisi yakho ye-bachelor ngaphakathi kweentsuku ezili-14-31. Kuxhomekeke kwinkcazo kunye nesihloko, oku kukodwa. Eli lixabiso nalo ayichazwanga ngokuthe ngqo. Kungenxa yokuba ngexesha umbhali ebhala ngalo ithisisi yakho ye-bachelor, unokusebenza nakwicandelo labucala. Thatha ingqalelo indleko ze Umbhali oyingcali ihlala ifunyenwe njengoko iya kuthatha nawe ixesha elifanayo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubhala ithisisi ye-bachelor?
Ababhali bethu banako zingaphelanga iintsuku eziyi-14-31 bhala ithisisi ye-bachelor. Iya ku Ukubhalela ithisisi efanelekileyo ye-bachelor yakho kuya kuthatha umbhali oyingcali kwindawo yakho yesifundo malunga nexesha elide njengawe.
AmaPapernerds athumela ababhali ngugqirha kunye nokuhlala abangakubhalela umsebenzi olunge kakhulu. Ukuze ube nakho ukukuqinisekisa ngomgangatho ophezulu kwaye ngaphezulu kwayo yonke ithisisi ye-bachelor epheleleyo, buza ngexesha elifanelekileyo.
Ewe umbhali onamava angabhala ithisisi yakho ye-bachelor ngexesha elifutshane kakhulu, kodwa oku kuya kunciphisa umgangatho kunye nokugqibelela komsebenzi wakho.
Ngubani oza kundinceda ngethisisi yam ye-bachelor?
Sinababhali abahle kakhulu abanobugqirha kunye nokuhlala, kunye noonjingalwazi abaphuma kwezinye iindawo abanokukunceda ngethisisi yakho ye-bachelor.
Ngaba ungayihlawula ithisisi yakho ye-bachelor ngezavenge?
KwiPapernerds ngokuqinisekileyo unokukhetha ukuhlawulela ithisisi yakho ye-bachelor ngezavenge. Siyavuya uku Ukuhanjiswa kwenxalenye kunye neentlawulo ezithile lungisa.
Ngubani ngokwenene obhala umsebenzi?
Kubaluleke kakhulu kuthi ukuba imigangatho esemgangathweni ilungile. Yiyo kanye le nto sisebenza kuphela nabahlohli abanamava, izifundiswa kunye nababhali beziporho abavela kumasebe afanelekileyo. Nabani na onesidanga se-bachelor esibhalwe nathi unethuba lokulungelelanisa nokucebisa ngokweenkcukacha ngesiporho sakhe. Ukuba ungathanda ukufunda ngakumbi malunga neziqinisekiso zababhali bethu Qhagamshelana nathi ndiyacela!